တိုနီဘလဲ O'Neal ရုပ်ပုံများနှင့်ဇီဝ (Big လူငယ်များသို့ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား)
2011 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦး LPGA ပြိုင်ပွဲများအတွက် Alabama တှငျစဉ်ဘလဲ O'Neal Mobile ၏ Mardi Gras ပြတိုက်သွားရောက်ခဲ့သည်။ Getty Images ကနေတဆင့် tad Denson / LPGA
တိုနီဘလဲ O'Neal ပထမဦးဆုံးဂေါက်ကွင်း Channel ကိုစီးရီးပျေါမှာထငျရှား အဆိုပါ Big လူငယ်များသို့ အဆိုပါကာလအတွင်း Big လူငယ်များသို့ Prince Edward Island တွင် ရာသီ။ ထိုမိန်းမသည်ပြေးသမား-Up အဖြစ်ပြီးသွား, တော်တော်ကောင်းကောင်းအခြေအနေကော။
2010 ခုနှစ်တွင် O'Neal တစ်သွန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ပေါ်ထွန်းနောက်ထပ်ရာသီအတွက်ပြန်ရောက် သည့် Big လူငယ်များသို့ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ။
အောက်ပါစာမျက်နှာများတွင်ကျွန်တော်သူမကိုအနည်းငယ်ပိုပြီးဓာတ်ပုံကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ပေါင်းသည်အဘယ်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခြားအရာများကြားတွင်, ရုပ်မြင်သံကြားအလုပ်နဲ့ web hosting အတွက်သို့တိုးချဲ့ထားပါတယ် O'Neal, အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သူမ၏ Big လူငယ်များသို့
မာကု Ashman / ဂေါက် Channel ကို
(အယ်ဒီတာမှတ်ချက်အောက်ပါစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ပေါ်လာသောအတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်များကိုဂေါက်သီး Channel ကိုကထောက်ပံ့ပေးသည့် Big လူငယ်များသို့ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံပရီးမီးယားလိဂ်၏အချိန်မှာလက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ )
တိုနီဘလဲ O'Neal အကြောင်းကိုအနည်းငယ်အချက်အလက်များ:
နေထိုင်ခွင့်: Scottsdale, Ariz ။
မွေးရပ်မြေ: Temp, Ariz ။
မူလစာမျက်နှာဂေါက်ကွင်း: အရီဇိုးနားပြည်နယ် Karsten ဂေါက်ကွင်း, Temp, Ariz ။
စိတ်ဝင်စားမှုများ: Travel, ဖက်ရှင်, ယောဂ, တောင်တက်နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်း
အလုပ်အကိုင်: ဂေါက်ကွင်း Professional က
တိုနီဘလဲ O'Neal မော်ဒယ်ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား
အဆိုပါဂေါက်ကွင်း Channel ကိုစီးရီးဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားဘလဲ O'Neal '' Big လူငယ်များသို့ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ။ '' ။ မာကု Ashman / ဂေါက် Channel ကို
တိုနီဘလဲ O'Neal သူမ၏ပထမဦးဆုံးနဲ့ Big လူငယ်များသို့စီးရီး, Big လူငယ်များသို့ Prince Edward Island တွင်အပေါ်တစ်ဦးပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်တဲ့အခါသူတစ်ဦးဂေါက်သီးအဖြစ်လူသိများမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူမသည် Collegiate ကစားနှငျ့အခြို့ရှည်လျား-drive ကိုပြိုင်ပွဲများတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပေမယ့် O'Neal ပိုကောင်းသူမ၏သူမ၏ဂေါက်သီးဘို့ထက်မော်ဒယ်အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလန်းလာသောအဘို့အကြောင်းအချက်မှာလူသိများခဲ့ပါတယ်ခဲ့သည်။
မည်သူမဆိုသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနဲ့ Big လူငယ်များသို့အသွင်အပြင်ပြီးနောက်အသက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အတှေ့အကွုံခဲ့လျှင်မူကား, ကဘလဲ O'Neal ဖြစ်ခဲ့သည်။
Big လူငယ်များသို့ pei အပေါ်သူမ၏အသွင်အပြင်စဉ်အတွင်း O'Neal ဂေါက်သီးတစ်ဦးထံမှတိုးချဲ့ခွင့်၏အလယ်၌ရှိ၏နှင့်မော်ဒယ်နှင့်သရုပ်ဆောင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ သို့သော် BBPEI အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပြီးသူမကိုသူမကဂေါက်သီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ကြာသောအရာကိုရှိပါတယ်လျှင်ထွက်ရှာရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
စဉ်အတွင်းတိုနီဘလဲ O'Neal '' Big လူငယ်များသို့ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ။ '' ။ မာကု Ashman / ဂေါက် Channel ကို
ပြေးသမား-Up အဖြစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်အဖြေကို, O'Neal ဆုံးဖြတ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
"ဒါကပြပွဲငါ့ကိုကြီးတွေလမ်းအတွက်ကျောဂေါက်သီးသို့အရအကူအညီပေးခဲ့," O'Neal ကဆိုသည်။ "ငါသည့်ဂေါက်သီးကစားခြင်းနှင့်ပြိုင်ပွဲကစားကိုချစ်ဘယ်လောက်သဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါဟာငါ့အဂေါက်သီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ထိုကဲ့သို့သောထပ်တိုးခဲ့ပါတယ်။ "
BBPEI ပြီးနောက် O'Neal ဂေါက်သီးမှာလေးနက်သောအလေ့အကျင့်သို့ပြန်ရောက်ပြီးလျှင်, ရှားစောင်းပင်လှည့်လည်ပေါ်ပြိုင်ပွဲကစားစတင်ခဲ့သည်။ ယင်းရှားစောင်းပင်လှည့်လည်အပေါ်အနိုင်ရကတည်းကသူမသည်ရှိပြီး, အ Symetra Futures ခရီးစဉ်အပေါ်ကစားနှင့် LPGA ခြေစစ်ပွဲပြိုင်ပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ။
Big လူငယ်များသို့ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအပေါ်ဘလဲ O'Neal
O'Neal သူမ၏သည်အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပေါ်တက်မပေးသောထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုပေါင်းစပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာတွေ့ခဲ့သည်။ BBPEI ကတည်းက O'Neal လည်း golfchannel.com အပေါ်တစ်ဦးစီးရီးတည်ခင်းဧည်နှင့်ဂေါက် Channel ကိုအပေါ်အချို့သော hosting တာဝန်များကိုရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် O'Neal ဟာ LPGA Tour အပေါ်သူမ၏မျက်စိနှင့်အတူတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ဂေါက်သီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုက်စားအပေါ်အာရုံစိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။
"အဲဒါကိုဖြစ်ပျက်စေရန်အချိန်နှင့်တူယခုငါခံစားရတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "ဒါဟာဖြစ်ပျက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
"(Big လူငယ်များသို့ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအပေါ်) ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်ငါ pei မှာကျောမလုပ်ခဲ့ဘူးကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အနိုင်ရသည်။ "
တိုနီဘလဲ O'Neal Puma များအတွက် 2011 ခုနှစ်ယော်ဒန်မြစ် Strauss / Getty Images အတွက် Puma ဂေါက်သီးအဖြစ်အပျက်တက်ရောက်ရန်
အဘယ်မှန်းဆ? O'Neal Big လူငယ်များသို့ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအနိုင်ရပြုလေ၏။ အဲဒီမှာယောက်ျားရဲ့နှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံး "MVPs," နှင့် O'Neal ကြောင်းစီးရီးပေါ်တွင်အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲဝင်တို့တွင် MVP ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကဲ့သို့သောသူကို cut လွဲချော်ရှိရာ 2011 ခုနှစ် LPGA Kia ဂန္ထဝင်သို့အနေနဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
သို့သော်တစ်ဦးဂေါက်သီး, မော်ဒယ်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တီဗီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအဖြစ်သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကတည်းကနှစ်များတွင်ချွတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ O'Neal သည်အခြားအမှုအရာတို့တွင်အ Cobra ဂေါက်သီးရိုက်ဘို့အရေကူးဝတ်စုံနဲ့ pin ကို-ups နှင့်ဂေါက် Channel ကိုအပေါ်တစ်ဦးဂေါက်သီးနည်းပြဆရာအဖြစ်ရှုမြင်ထားသည်။
က Tiger Woods ''3ဗြိတိန်ပွင့်လင်းနိုင်ပွဲများ
က Tiger Woods '' ဇယား: ဘယ်မှာသူဟာဂေါက်သီးရိုက် Next ကိုဖွင့်ပါသလား
ဝါကျ Connectors နှင့်ဝါကျများကို
Safely တစ်နေကြတ် View ကိုဘယ်လို
ရွေးချယ်အော်ရီဂွန်ကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် SAT ရမှတ်များ
ဂေါက်ကွင်းတစ် Wormburner ဆိုတာဘာလဲ
5 အရာဟာ Sat တိုင်းသို့မဟုတ်ကိုခန့်မှန်းမဟုတ်
တုရုမြို့ပြုပြင်ခြင်း: patch vs. Plugging
တစ်ဦးထိန်းချုပ်ထား Scuba ဆင်းသက်လာ6ခြေလှမ်းများ
Rap ဂီတအတွက် 10 အကောင်းဆုံးမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နမူနာ
ဝါကျ structures များနှင့် Styles: စာရေးဆရာတစ် Sampler
Semi-မြေအောက်ဆောင်းရာသီအိမ်များ - သမိုင်းမအာတိတ်အိမ်ရာ
မီး Folklore နှင့် Legends
ရွှေ Periodic ဇယားတွင်အဘယ်မှာတွေ့ပါသလား
ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်ခရစ်စမတ် - နိုရဲ့ဝေါဟာရ, ရိုးရာနှင့် Decoration